Porn၊ Pseudoscience နှင့် DeltaFosB (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်
porn, Pseudoscience နှင့် DeltaFosB (2013)
အပေါ်မွမ်းမံမှုများ DeltaFosB (WSIT ၀ င် WFosB)
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 41 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, hormonal) ။ သူတို့တွေ့ရှိချက်များသည်ပစ္စည်းစွဲလေ့လာမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောအာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်စေသောကြောင့်သူတို့သည်စွဲလမ်းမှုပုံစံကိုခိုင်မာသည့်အထောက်အပံ့များပေးသည်။ DeltaFosB သည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အပိုဒ်: သငျသညျ porn စွဲအကြောင်းကိုထိုအ5အကျွမ်းတဝင်ဒဏ္ဍာရီကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသလား?
ပြpornနာရှိသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်“ မသင်မနေရ” မဟုတ်ဘဲ“ စွဲလမ်းမှု” ဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲပါလျှင် ခဲ့ကြ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့, အခြားစှဲနေတဲ့သီးခြားခွအေနအေအဖြစ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု / သုတေသနပြုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူသည်မျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်သောအခါမည်သူမျှမပြောနိုင်သောကြောင့်“ ရောဂါဗေဒညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း” ဟူသောအယူအဆသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိ။
“ အပြာ” ကိုမည်သည့်အခါကမျှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ဆို၍ မရပါ၊
(စသည်တို့ကို ADHD, စိတ်ကျရောဂါ,) Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများနှင့်အတူလူသာလျှင် porn အပေါ်စှဲဖြစ်လာသည်။
ဒါကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအဖြစ်မဖြစ်နိုင်, သာနှစ်အနည်းငယ်ဟောင်းတစ်ခုတည်း neurobiological ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲ၏တည်ရှိမှုကိုထှကျသှားစပွေီးဤ sciency ဆင်ခြင်တုံတရားအပေါငျးတို့သ invalidates ။
အဘယ်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှု? ΔFosB (DeltaFosB)
စွဲ neurobiologists ကြောင်းထင်ရှားပါပြီ အားလုံး စွဲခြင်း, ဓာတုနှင့်အပြုအမူနှစ်ခုလုံး, သော့ချက်မော်လီကျူး switch ကိုမျှဝေဖို့ပုံရသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့မိုင်အကွာအဝေးကွဲပြားခြားနားပေမယ့်လွင်ပြင်အင်္ဂလိပ် (နောက်ပိုင်းတွင်အသေးစိတ်နှင့်အတူ), ဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဒီမှာ
သငျသညျဖက်တီး / sugary အစားအစာများ, မူးယစ်ဆေးဝါး overconsume သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမြင့်မား ဖြစ်စေတဲ့ ရှိမည်ဟု dopamine အကြိမ်ကြိမ်။
နာတာရှည် overconsumption နှင့်ဆက်စပ် dopamine spikes အကြောင်းမရှိ ΔFosB သင့်ဦးနှောက်၏သော့ချက်ဒေသများရှိတဖြည်းဖြည်းစုပြုံရန်။ (ΔFosBတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကူးယူအချက်ဆိုလိုသည်မှာ, သင့်ဗီဇမှချည်နှောင်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်ပိတ်သူတို့ကိုလှည့်တဲ့ပရိုတိန်း။ )
ΔFosBပြီးတော့ပြောင်းလဲတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အလှည့်ပတ်ဆွဲထားတဲ့ သင့်ရဲ့ဗီဇရဲ့တုံ့ပြန်မှု, တိုင်းတာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအပေါ်မြင်၏။ ဤရွေ့ကားနဲ့စတင် ာင်းဆိုလိုသည်မှာ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ် circuit ကို hyper-reactivity ဖြစ်သော်လည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်သီးခြားအချက်များကိုသာတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ΔFosBခြင်းဖြင့်အစပျိုးဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံး overconsuming သငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်လေ့သို့မဟုတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သင့်ဦးနှောက်တစ် Fertilization ပွဲတော်တွင်အဖြစ်ရိပ် မိ. အဘယ်အရာကိုမှ riveted ။
မော်လီကျူး switch ကို
သုတေသီအရ အဲရစ် Nestler,
လုနီးပါးတစ်ဦးနဲ့တူ [ΔFosBဖြစ်ပါသည်] မော်လီကျူး switch သည်။ ... အပေါ်သို့လှန်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်ခဏနေပြီးအလွယ်တကူမသွားနိုင်ပါ။ ဤဖြစ်စဉ်သည်မည်သည့်အလွဲသုံးစားမှုကိုမဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကြာရှည်စွာကိုင်တွယ်ရန်တုန့်ပြန်သည်။ ဒါဟာအစ၏စားသုံးမှုမြင့်မားပြီးနောက်လေ့လာသည် သဘာဝကဆုလာဘ် (လေ့ကျင့်, sucrose, မြင့်မားတဲ့အဆီဓာတ်စာ, လိင်).
လေ့လာမှုအချို့အရ DeltaFosB သည် ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိရှောင်ရန်လိုအပ်သည်။ လေ့လာရန်များစွာကျန်ရှိသေးသည်။ DeltaFosB မရှိတော့သော်လည်းအထိခိုက်မခံသောလမ်းကြောင်းများသည်တစ်သက်တာအတွက်ကျန်ရှိနိုင်သည်။ သတိရပါ၊ DeltaFosB ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေသည့်အရာမှပိုမိုကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုကိုခံစားရစေရန် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လည်ပတ်စေခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤမှတ်ဉာဏ် (သို့) နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်စွဲနေသောသင်ယူမှုသည်ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။ စွဲလမ်းသည်ပျက်စီးခြင်းမဟုတ်ပါ ရောဂါဗေဒသင်ယူမှု.
အဆိုပါအချက်လူတိုင်း DeltaFosB ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ကြောင့်နာတာရှည် overconsumption မှစုဆောင်းပါလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆို compulsion ရန်နှင့်မတရားသောသုံးစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တကယ်တော့, သှေးဆောငျန်းကျင်အခါ overconsume ဖို့ drive ကိုတိရစ္ဆာန်နိုင်ငံတော်တရှောက်လုံးကိုတွေ့သည်။
တိရိစ္ဆာန်အာဟာရ, Mark Edwards ကငါတို့ရှိသမျှသည်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုပိုလျှံအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးရန်ခက်ခဲ-ကြိုးနေ "ထွက်ထောက်ပြသည်။ ငါမတဲ့မျိုးစိတ်မထင်နိုင်ပါသည်။ " Tamarin မျောက် သူတို့ရဲ့အူလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်မကြာမီသူတို့ gobbling ကြသည်တပြင်လုံးကိုအသီးအပွ excrete တဲ့အခြိနျမှာဤမျှလောက်များစွာသောသီးစားရန်ကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။
ဒါကြောင့်ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုဟာငါတို့အလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းမှာကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နေတယ်။ ဒီနေ့အခမဲ့ဝိုင်အမ်တီအမ်ဟာအထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာသည် ,FosB ၏သုတေသနပြုချက်အရအရွယ်ရောက်သူများထက်စွဲလမ်းမှုသည်သူတို့အတွက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသည်။ အဆိုအရ Nestler,
ဆယ်ကျော်သက်တိရိစ္ဆာန်များစွဲဘို့မိမိတို့ သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, အဟောင်းတွေတိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါΔFosBတာ သာ. ကွီးမွတျသော induction ပြသ.
ပိုမိုမြင့်မားသောΔFosBဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်တဦး ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ထူးခြားသောရှုထောင့် ကြောင်းစွဲဖို့သူတို့ကိုပိုပြီးအားနည်းချက်ပါစေ။
၁။ ဒဏ္:ာရီ - အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပြProbleနာသည်ပြpornနာမဟုတ်ဘဲ“ မတော်မတရားပြုခြင်း” ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဆေးစွဲသူများသည်အမူအကျင့်စွဲခြင်း (“ အတင်းအကျပ်”) ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲသူများနှင့်ခွဲခြားသည့်ခေတ်မှ“ ခြားနားချက်မရှိဘဲခွဲခြားခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဤသည် lingo အဆိုပါကျဆင်းနေ သုတေသနလုပ်ငန်း ဖေါ်ပြခြင်းအတွက်ကြောင့် ဦးနှောက်စက်ပြင် နှစ်ဦးစလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာသေချာပေါက်အတူတူပါပဲ။ ကံမကောင်းစွာပြုလုပ်ဆဲထိရောက်သောခြားနားချက်ထင်ဟပ်ကဲ့သို့အချို့တို့ကမှားနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်, ရှိပါတယ် မဟုတ်နှစ်ခုသီးခြားလမ်းကြောင်း သို့မဟုတ်မော်လီကျူးပြောင်းလဲမှုအစုံ: မလှူဘို့တနှင့်စွဲဘို့တ။ တစ်ခုတည်းရှိပါတယ် ဦးနှောက်ဖြစ်ရပ်များ၏ကြယ် ကြောင်းဆက်လက် overconsumption အားပေးအားမြှောက်နှင့်တဦးတည်းမူလတန်းစတငျ: ΔFosB။
တစ်ခုစွဲအမူအကျင့်သို့မဟုတ်ဓာတုဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, စုဆောင်းΔFosBအဆင့်ဆင့်စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူပတျသကျ။ ပြည်သူ့တနေ့ပင်နှစ်ဦးစလုံးကိုဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့၏ΔFosBအဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်ဖို့နိုင်မည်အကြောင်း သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်သူတို့၏နာလန်ထူ၏ဒီဂရီ၏အတိုင်းအတာ။ * မရှင်းပြသည် * သုတေသီအဲရစ် Nestler အဆိုအရ,
၎င်းသည်နျူကလိယတွင်အက်ဖ်ဘီဘီအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများတွင်လူတစ် ဦး ၏ဆုလာဘ်တိုက်နယ်၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေနှင့်လူတစ် ဦး ၏စွဲလမ်းမှုအတိုင်းအတာကိုအကဲဖြတ်ရန် biomarker အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ချေကိုပေါ်ပေါက်စေသည်။ တိုးချဲ့ဆေးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုစဉ်အတွင်းတစ် ဦး စွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်၎င်း၏တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်နေစဉ်။
2 ။ ဒဏ္ဍာရီ: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲပါလျှင် ခဲ့ကြ အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့, အခြားစှဲနေတဲ့သီးခြားခွအေနအေအဖြစ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြု / သုတေသနပြုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဒါကစိတ်ကူးယဉ်ကတက်ထို့ပြင်ဖြစ်ပါတယ် DSM ၏တရားမဝင်ငြင်းဆန်မှု ကောင်းစွာထူထောင်စွဲ neuroscience နှင့်အညီသို့လာရန်။ နောက်ဆုံးတွင်ယခုလတွင် DSM-5 သည်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်စဉ်းစားနေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။အမူအကျင့်စှဲ။ " DSM-5 သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအမည်ပြောင်းနောက်ဆက်တွဲနှင့်ဆက်နွှယ်သည့်“ ထပ်မံလေ့လာရန်” ကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကြိုဆိုသည့်ဆုံးမချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောစှဲအကြားဘာသာဂုဏ်ထူးသူတို့ကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်လျှင်အဖြစ်င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး, အ DSM ပြုမူခဲ့သည်။ ဤသည်ΔFosBဝန်းကျင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ၏အမြင်များတွင်ဒဏ်ဍာရီဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားမှာ, အဘယ်အရာကိုအားလုံးစှဲဖြစ်ပါသည် ဝေစု ကြောင်းစွဲလမ်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော diagnoses မှမြင့်တက်ပေးသည်။
osFosB သည်တိကျသောဆဲလ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (dynorphin ကိုတားဆီးပေးပြီး glutamate2receptor ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်၊ dendritic လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချဲ့ထွင်သည်)၊ phenotype။ တနည်းအားဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ရသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးကိုပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ရန်အရာမျိုးဗီဇစကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲမှသတိရ-ဆောင်ရကျိုးနပ်ဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အဖြစ်အရေးကြီးသောက register လုပ်သွားထံမှဆွ။
ဆက်လက် overconsumption နှင့်အတူ (နှင့် overlearning, ဆိုလိုသည်မှာစွဲ) ဤပွောငျးလဲထို့နောက် diagnosable အဖြစ်ဖွင့်ပြပါ အပြုအမူနှင့်ရောဂါလက္ခဏာအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းမတရားသော, သုံးစွဲဖို့မလှူခြင်းနှင့်ဆက်လက်သုံးစွဲခြင်းအဖြစ် -such ။
Overconsumption → dopamine →ΔFosB→စွဲ-related အပြောင်းအလဲများ
၃။ ဒဏ္MYာရီ - ရောဂါဗေဒညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းဟူသည့်အယူအဆသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်အသုံးပြုသူသည်မျဉ်းကိုဖြတ်ကျော်သောအခါမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမပြောနိုင်ပါ။
သိသာထင်ရှားသည့်မေးခွန်းမှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောဂါဗေဒဖြစ်လာသည် (ဆိုလိုသည်မှာစွဲလမ်းမှုတစ်ခု) ဖြစ်လာသနည်း။ ” အဖြေမှာရိုးရိုးလေးဖြစ်သည် -“ လှုံ့ဆော်မှုပမာဏသည် osFosB နှင့်သက်ဆိုင်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခါတိုင်း”
တစ်ခုချင်းစီကိုစွဲလမ်းအဖြစ်ကောင်းစွာအတန်ငယ်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုသော်လည်းစွဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်း (ဥပမာΔFosBကြောင့် induces ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများစုစည်းနေခြင်းကဲ့သို့) သူတို့ရဲ့ဘုံဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယင်း စွဲလမ်းဆေးပညာများအတွက်အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်း (ASAM) ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစွဲအခြေခံကျကျတဦးတည်း (ဦးနှောက်) ရောဂါဖြစ်ပါသည်ကအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဒါတောင်မှမစွဲသေးတဲ့စွဲလမ်းမှုအပြင်ဘက်ကဝေဖန်သူတော်တော်များများဟာ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်း, အင်တာနက် porn အပျိုစင်များအပေါ်ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများမပါဘဲ, porn စွဲ၏တည်ရှိမှုသက်သေပြမရနိုင်သည်ကိုဆက်လက်ယူဆကြသည် ဤဖော်ပြချက်သည်မသိရသောအချက်များမှလုံလောက်စွာအသံထွက်နိုင်သော်လည်းယခုအခါ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် pseudoscience အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
၄။ ဒဏ္MYာရီ -“ ညစ်ညမ်း” ဆိုတာဘယ်တော့မှအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့မရဘူး။
ဒီဒဏ္myာရီအနီရောင် herring ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် porn စွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုသက်သေပြရန်“ porn” ကိုသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? အကြောင်းကတော့၎င်းသည် ဦး နှောက်၏နျူကလိယတွင်ထုတ်လွှတ်သည့်ပြင်းထန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ ဦး နှောက်၏နျူကလိယတွင်ထုတ်လွှတ်သော dopamine ပမာဏ) သည် - အရင်းအမြစ် ကြောင်းဆွ - သော osFosB ၏စုဆောင်းခြင်းမှမြင့်တက်ပေးသည် ... နှင့် စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများ.
ထို့ကြောင့်“ ညစ်ညမ်းသောအရာသည်မည်သည့်အရာနှင့်စပ်ဆိုင်သည်” နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများသည်နီရဲသောအနီများဖြစ်သည်။ သင်သည်ခြေထောက်ပုံ၊ မိန်းကလေး - အသည်းအသန်အသည်းအသန်သို့မဟုတ်ရေကူးဝတ်စုံမော်ဒယ်များကိုသင်နှိပ်ခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည် သင့်ရဲ့ သင်၏သာမန်အခြေအနေကိုယန္တရားများကိုပယ်ဖျက်ပြီး osFosB ကွင်းဆက်ကိုလှုံ့ဆော်ရန် dopamine သည်သင်သည်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ မပါဘူးဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမစွဲ။
As ASAM အထဲကထောက်ပြ, စွဲလမ်းအကြောင်း ဦးနှောက်အထူးသဖြင့်မရလှုပ်ရှားမှုများ-သို့မဟုတ်ပုံရိပ်ယောင်များ။
5 ။ ဒဏ္ဍာရီ: Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများနှင့်အတူသာလျှင်လူဦး porn အပေါ်စှဲဖြစ်လာသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအတွက်သို့မဟုတ်အခြားစွဲလမ်းမှုအတွက်ဤအရာသည်မမှန်ပါ။ ပထမ ဦး စွာ osFosB- သွေးဆောင် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုသည်မွေးရာပါမဟုတ်သောကြောင့်စွဲသည်မလွှဲမရှောင်နိုင်ပါ။ အဖြစ် အလန် Leshner, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းကရှင်းပြသည်,
မင်းရဲ့မျိုးဗီဇတွေကမင်းကိုစွဲလမ်းသူလို့မထင်ပါဘူး။ သူတို့သည်သင့်ကို ပို၍ ဖြစ်စေ၊ မင်းကိုစွဲလမ်းစေမယ့်ဗီဇတစ်ခုဒါမှမဟုတ်မင်းကိုစွဲလမ်းစေမယ့်မျိုးဗီဇတစ်ခုကိုငါတို့တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။ ”
ဒုတိယအချက်မှာမသက်ဆိုင်တစ်စုံတစ်ဦးသည်, ရပါမည်, (ကြောင့်အမွေဆက်ခံ DNA ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာမှရှိမရှိ), သူသို့မဟုတ်သူမပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ရမယ်စွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအားနည်းချက်၏ overconsumption အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ΔFosBဦးနှောက်များတွင်စုပြုံစတင်မီ။ ဒါဟာလွတ်လပ်စွာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများဆက်ဆက် overconsumption ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနှင့်၎င်း၏ရလာဒ်များကိုပိုမိုကြီးကျယ်စေနိုင်သည်ဟုပြောသည်ဒါကစသည်တို့ကို ADHD, စိတ်ကျရောဂါ, OCD, ကဲ့သို့သောအခြေအနေဖြစ်လာတယ်။
အထက်ကရှင်းပြသည် overconsumption မျိုးဗီဇ၏ΔFosB→ activation synapses အတွက်→အပြောင်းအလဲများကို→စွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများစုဆောင်းခြင်းမှဦးဆောင်ဆက်လက်မတရားသော→အဖြစ်, compulsive ဆက်လက် overconsumption →။ (ကြည့်ရှုပါ အဆိုပါစွဲဦးနှောက် အသေးစိတ်များအတွက်။ )
သိပ္ပံပညာရှင်များကယုံကြည်ကြသည် ဗဟိုဦးနှောက်အပြောင်းအလဲ ΔFosBဖြစ်ပါတယ်စတင် ာင်း။ အသိ သငျသညျ ပို. အရေးကြီးသောနှင့်ကြိုးသည်အခြားဆုလာဘ်ထက်အသုံးပြုနေသည်သမျှကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဤသည်ကိုအသုံးပြုရန်မတရားသောနှင့်မလှူ၏အစဖြစ်ပါသည်။
Sensitized လမ်းကြောင်း အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ် Pavlovian အေးစက် စတီရွိုက်ပေါ်မှာ။ တို့က activated လိုက်တဲ့အခါ အတှေးအသို့မဟုတ်အစပျိုးခြင်း, sensitized လမ်းကြောင်းခက်ခဲ-to-လျစ်လျူရှုမတရားသောတက်ပစ်ခတ်, အကျိုးကို circuit ကိုဗုံး။ ရေအနည်းဆုံးခုခံ၏လမ်းကြောင်းမှတဆင့်စီးဆင်းဒါ Impulses သတင်းပို့နှင့်အရှင်အတှေးအလုပျသကဲ့သို့။ မည်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအမျှပိုငျကလုပျသည်ပိုမိုလွယ်ကူကျင့်သုံးပါ။ မကြာခင်မှာပဲသူကမဆိုသတိအတွေးမပါဘဲအလိုအလျောက်ဖြစ်လာသည်။
အသိမြှ-မောင်းနှင် overconsumption (ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်အပျော်အပါးမှလျော့နည်းခြုံငုံတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကအခြားဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်desensitization) ။ အဘယ်ကြောင့်? အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့် dopamine အားဖြင့်ဗုံးကြဲသောအာရုံကြောဆဲလ်များက“ လုံလောက်လောက်ပြီ” ဟုဆိုသည်။ လက်ခံရရှိသောအာရုံကြောဆဲလ်များသည်သူတို့၏နားရွက်များကိုလျှော့ချပေးသည် dopamine (D2) receptors.
desensitization နေ့စဉ်အပျော်အပါးရန်သင့်အား numbing ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သတိထားသင့်ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဘာမှရန်သင့်ဦးနှောက်ကို Hyper-reactive စေသည်။ တနည်းအားဖြင့် desensitization တစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုတယ် အနုတ် sensitization သည်aကိုကိုယ်စားပြုစဉ် overdrive ရှိ feedback loop အပြုသဘောဆောင် တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက် overdrive ၌တည်၏။ ဤသည်အားလုံးစွဲ၏အခြေခံသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဤနှစ်ဖက်စလုံးကဤယန္တရားသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုသုံးရန်အရက်သောက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပွငျအဖြစ် ဆုလာဘ် circuit ကို dopamine ကိုလည်းဖြန့်ဖြူး အုပ်ချုပ်သောဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်း အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (ထို prefrontal cortex), သငျသညျမကြာမီတတိယစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲခံရပေမည်။ Desensitization (dopamine နဲ့ dopamine D2 receptors အတွက်ကျဆင်းမှု) ဆိုးရွားစွာသင့်ရဲ့ prefrontal Cortex-ထုတ်လုပ်မူမမှန်အဖြူကိစ္စထိခိုက်စေနိုင်သည်, မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဇီဝြဖစ်လျှော့ချ။ ဤအပြောင်းအလဲများဟုခေါ်ကြသည် hypofrontality။ သူတို့ကသင့်ရဲ့အရင်းခံတွန်းအားကိုထိန်းချုပ်အားနည်းခြင်းနှင့် Over-တန်ဖိုးထားလေးမြတ်သင့်ရဲ့စွဲဖြစ်ပေါ်။
Desensitization ၌ရှိသကဲ့သို့ (အစားအလျင်အမြန်ရာအရပျယူနိုငျ ကြွက်န့်အသတ်ကော်ဖီဆိုင်အစားအစာကိုကမ်းလှမ်းဒါဟာနှစ်ပေါင်းကြာနိုင်) သို့မဟုတ်။ အဆိုပါ ပြင်းထန်ခြင်း ဆွဒဖွယ်ရှိအထူးသလှုံ့ဆော်မှုစွဲဖြစ်လာအသုံးပြုသူများသည်အဘယ်သို့ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Damian Thompson က ကရှင်းပြသည်,
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရအပျော်အပါးလိုက်စားခြင်းသည်စွဲလမ်းစေရန်အမြန်လမ်းဖြစ်သည်။ …ခေတ်နောက်ကျသောအပြာနှင့်အင်တာနက်အကြားခြားနားချက်သည် ၀ ိုင်နှင့် ၀ ိုင်အကြားခြားနားသည်။ နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်ပြီးနောက် erotica သည်ရုတ်တရက်ရေစက်ကျသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်ဂျော်ဂျီယာအင်္ဂလန်၌ဈေးပေါသောဂျင်နှင့်တူညီသည်။ ၁၈ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်လန်ဒန်၏အတွင်းပိုင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ …နောက်ဆုံးမှာဂျင်ရဲ့တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်တွေကိုဖြိုခွဲခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့ဥပဒေကထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ စျေးပေါတဲ့ဂျင်မရရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်စွဲလမ်းတဲ့သောက်စားသူတွေဟာအကျင့်စရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, စွဲခေါ်ဆောင်သွားအစပျိုးခြင်း၏ကြွယ်ဝသောစည်းစိမ်များကြားတွင်အလေ့အကျင့်ကန်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုထောကျပံ့ဖို့ရှိခြင်းနေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဇီဝဗေဒΔFosBမှကျေးဇူးတင်ပါသည်သူတို့တဘက်၌ stacked ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကင် မဟုတ် pseudoscience ။
ဒီဆောင်းပါး၌ DeltaFosB အတွက်ကိုးကား
DeltaFosB: စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch ကို (2001)
သဘာဝဆုကြေးနှင့်နောက်ပိုင်းဆုကြေး Abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ Mesolimbic စနစ်အတွက် Neuroplasticity ။ (2010)
နျူကလီးယပ် Accumbens ခုနှစ်တွင်ΔFosB Overexpression အမျိုးသမီးဆီးရီးယားဟမ်းစတား (2009) ခုနှစ်တွင်လိင်ဆုကြေးပိုကောင်းစေပါတယ်
သဘာဝနှင့်ဆေးဝါးဆုလာဘ်တစ်ခု Key ကိုအာမခံ (2013) အဖြစ်ΔFosBနှင့်အတူဘုံဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောပလပ်စတစ်ယန္တရားများအပေါ်ဥပဒေ
သဘာဝဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံကိုယင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် AMPA နှင့် NMDA အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် function ကို (2012) ပွောငျးလဲ
အပြုအမူ (2008) Related သဘာဝဆုကြေးပေါ်တွင်နျူကလိယ Accumbens အတွက်ΔFosB၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍ (2008)
စွဲ-related ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity အခြေခံမှတ်တမ်းယန္တရားများ (2010)
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB ၏ဦးနှောက် Buildup စွဲစေတယ်
dopaminergic neurotransmission အတွက်နာတာရှည်ပွောငျးလဲသည့်ကြွက်နှင့်မျောက် striatum နှစ်ဦးစလုံးအတွက် deltaFosB တူသောပရိုတိန်း (များ) ၏တစ်ဦး persistent မြင့်ထုတ်လုပ်ရန်။ (1996)
ကို run DeltaFosB စည်းမျဉ်းဘီး (2002)
ရေရှည်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဘီးပြေးကြိုးနှင့် mesolimbic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက် plasticity ထုတ်လုပ်သည်။ (2010)
နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် DeltaFosB စားနပ်ရိက္ခာစစ်ကူတူရိယာဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် Motivation (2006) ထိန်းညှိ
orbitofrontal cortex အတွက် DeltaFosB သော induction ကိုကင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု attenuating ရှိနေသော်လည်း locomotor ာင်း potentiates ။ (2009)
dopamine အချက်ပြအတွက် DeltaFosB-mediated ပွောငျးလဲတစ်အရေးပါတယ်လို့မြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာ (2008) ကပုံမှန်နေကြတယ်
ဆန္ဒပြ Neuroplasticity တစ်ဦးရောဂါဗေဒအဖြစ်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာ (2007)
မူးယစ်ဆေးအတှေ့အကွုံဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ကြွက်နျူကလိယ accumbens (2012) တွင် Fosb ဗီဇသွေးဆောင် primes
Electroacupuncture ဆုကြေး-Related ဦးနှောက်နေရာများအတွက် FosB / ΔFosB Levels ၏လျှော့ချရေးသက်ဆိုင်သောအလွန်အကျွံအရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းစေပါသည်။
အဆိုပါဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ် (2012) တွင်နာတာရှည် Opiate Exposure အားဖြင့်သွေးဆောင် FosB / ΔFosBဖော်ပြမှု၏ Glucocorticoids စည်းမျဉ်းဥပဒေ
စွဲလမ်းအတွက် Neuroplasticity: ဆယ်လူလာနှင့်မှတ်တမ်းအမြင်များ (2012)
Periadolescent ကြွက်တွေကိုကင်းနှင့်အဖက်တမင်းဆေးပြား (2002) မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Enhanced ΔFosB Upregulation ပြရန်
သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှု Factor နှင့်စခန်းတုံ့ပြန်မှု Element ကို binding ပရိုတိန်းနှစ်ဦးစလုံးမြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ၏ကင်း induction (2012) အတွက်လိုအပ်သောနေ
သွေးရည်ကြည်တုံ့ပြန်မှုအချက် DeltaFosB ၏ induction မှတဆင့်နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုမှခံနိုင်ရည်အားပေးအားမြှောက်။ (2010)
အသေးစားမော်လီကျူးမျက်နှာပြင်ကူးယူမှတ်တမ်းတင် Factor ΔFosB (2012) ၏ဥပဒေစည်းကမ်းဘက်တော်သားများကသတ်မှတ်ဖေါ်ပြ
Dopamine အပြုအမူ (2008) ထိန်းချုပ်ကြောင်း Key ကိုဦးနှောက် Circuits Reshapes
စွဲ - ဦး နှောက်၏ပလပ်စတစ်ဆုံးရှုံးမှုလား (၂၀၁၀)
စွဲမြား: A သင်ယူ၏ရောဂါနှင့် Memory (2005)